‘बैंकले ट्याक्सी’ लिलाम गर्ने भो, हामीलाई बाँच्न देऊ सरकार ! - Mitho Khabar
‘बैंकले ट्याक्सी’ लिलाम गर्ने भो, हामीलाई बाँच्न देऊ सरकार !
June 30, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on ‘बैंकले ट्याक्सी’ लिलाम गर्ने भो, हामीलाई बाँच्न देऊ सरकार !
‘बैंकले ट्याक्सी लिलाम गर्ने भो, हामीलाई बाँच्न देऊ सरकार !’
१६ असार, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले तीन महिना लामो लकडाउन गरेर आफूहरुका लागि राहतको प्याकेज नल्याएको ट्याक्सी व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कर पनि मिनाहा नभएको र किस्ता तिर्ने अवधि पनि थप नभएपछि आफूहरु मारमा परेको ट्याक्सी व्यवसायीको गुनासो छ । लामो लकडाउनका कारण आम्दानीको स्रोत पनि बन्द भएपछि दैनिक छाक टार्न पनि समस्या भएको भन्दै व्यवसायीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थालेका छन् ।
सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीको पक्षमा कुनै कदम नचाले ट्याक्सीको चाबी यातायात व्यवस्था विभागलाई बुझाउने व्यवसायी दीपक केसीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
मंगलबार प्रदर्शनका क्रममा रहेको उनले बानेश्वरमा अनलाइनखबरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
सरकारले लकडाउन गरेको तीन महिना भइसक्यो । अहिले लकडाउन सार्वजनिक यातायातलाई मात्र लागेको छ । सवारीसाधन हुने व्यक्ति निर्वाध रुपमा हिँडिरहेका छन् । सामान्य नागरिकलाई लकडाउन छ ।
कसरी बाँच्ने होला ? राज्यले हामीलाई बुझेन । राज्य ट्याक्सी व्यवसायीप्रति संवेदनशील भएन
ट्याक्सी पनि निजी कार जस्तै हो । संक्रमणको कुरा गर्ने हो भने निजी गाडीमा हिँड्नेलाई कोरोना हुने र ट्याक्सीमा हिँड्नेलाई नहुने भन्ने होइन । त्यसैले व्यस्थित तरिकाले पछाडि दुई जना राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
स्यानिटाइजर, मास्कसहित पछाडि दुई जना मात्र राखेर उपत्यकाभित्र कुदाउन पाऊँ भनेर हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौं । सोमबार रातिको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मोडालिटी फेरिएला भन्ने थियो । तर, कुनै नयाँ निर्णय आएन ।
बरु सात दिन पुनः उस्तै गरी लडकाउन भन्ने भनियो । अहिले हाम्रा बालबालिका प्रताडित छन् । घरमा खाने चिज छैन । बालबालिका भोकभोकै छ । गाडी सडकमा निकाले दिनभर राखिदिन्छ । अर्को समस्या हुन्छ । गाडीबाहेक आम्दानीको अर्को स्रोत छैन ।
कतिपय आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । रोग, भोक र तनावले मानसिक सन्तुलन गुम्ने स्थिति आइसक्यो । आज कमाएर बेलुका बाँच्नु पर्ने मान्छेलाई राज्यले अलिकति पनि सहयोग गरेको छैन ।
कसरी बाँच्ने होला ? राज्यले हामीलाई बुझेन । राज्य ट्याक्सी व्यवसायीप्रति संवेदनशील भएन । निजी गाडीले महँगो भाडामा यात्रु बोकिरहेका छन् । एम्बुलेन्सले बोकेका छन् । तर, आम नागरिकले चाहिँ सेवा पाएका छैनन् । अर्कोतिर मजदुर र व्यवसायीको स्थिति पनि नाजुक छ ।
गाडी, घर, जग्गा बैंकले लिलाम गर्ने भो । बोलाएको बोलाइ छ । यस्तो अवस्थामा रोगलाई बिर्सिएर हामी सडकमा निस्किनुको विकल्प थिएन । सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदियोस् ।
श्रीमान श्रीमतीले से-क्स गरेको भिडियो लिक भएपछि…
अमेरिकाले भन्यो : नेपाललाई एमसीसी अनुदान सधैं उपलब्ध हुन्न
प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा नेकपाका ३१ स्थायी कमिटी सदस्य
July 2, 2020 Suman Pandey
एपीएफ टोलीद्वारा लागूऔषधसहित तीन जना पक्राउ
July 4, 2020 Suman Pandey
छोरी भन्दा आमा तरुनी : श्रीमती छोडेर सासुआमा लिएर भागे ज्वाँई
प्रेमिका विवादमा एक नागरिकको हत्या ! हेर्नुहोस् पूरा विवरण ;
संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी, पछिल्लो २४ घण्टामा यति धेरै ले जिते कोरोना ! हेर्नुहोस् पूरा विवरण ;
गुल्मीमा वडा अध्यक्षसहित १२ जुवाडे पक्राउ
यस्तो रह्यो साम्राज्ञीदेखि पूजासम्मको दशैं(फोटो फिचरसहित)
बाबुरामलाई कांग्रेसको चुनौती : ९ अर्ब बाँडेर खाएको प्रमाण देऊ
‘म्याद गुज्रिएका सामान दुई वर्षदेखि बजारमा पठाइरहेको थिएँ’
आफूलाई फुलसँग तुलना गर्दै अदिती
कान्छो फ्रन्टलाइनर : फोहोरदेखि शवसम्म उठाउँछन्